डाक्टरको लापारवाहीले हामीले अभिभावक गुमायाैं, न्याय खै ?
डा.सिंहको उपचारमा डा.विश्व तुलाचन, डा.लक्ष्मी पाठक र डा.सन्तोष साह सहभागी
डा.ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंहका परिवार
आश्विन १६, २०७७ २१:०३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । डाक्टरको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएका भैरहवाका डा.ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंहका परिवार यतिबेला न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् ।
‘बुवाको उपचार गर्दा सम्पत्ति सकियो, पढ्न लिएको बैंक ऋणका कारण घरसमेत बैंकले लिलामी गर्दैछ’
भैरहवामा रहेको युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस अस्पतालमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डा. सिंहको सोही अस्पतालमै कार्यरत डाक्टरको लापरबाहीले २०७६ साल माघ २ गते मृत्यु भएको थियो ।
सिंहको उपचारमा नाक, कान, घाँटी विषेशज्ञ डा.विश्व तुलाचन, एनेस्थेसियाकी डा.लक्ष्मी पाठक र कार्डियोथोरासिक डा.सन्तोष साह सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
डाक्टरको लापारवाहीले आफ्ना बाबुको ज्यान गएकाले घटनामा दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने र आफूहरुले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने डा.ज्ञानेश्वरका छोरा प्रज्वल सिंह बताउनुहुन्छ ।
‘डाक्टरको लापारवाहीले हामीले अभिभावक गुमाएका छौँ, बुवाको उपचार गर्दा सम्पत्ति सकियो, पढ्न लिएको बैंक ऋणका कारण घरसमेत बैंकले लिलामी गर्दै छ’ प्रज्वलले भन्नुभयो, उपचारमा लापरबाही भएका कारण क्षतिपूर्ति हामीलाई यूनिभर्सल अस्पतालले दिनुपर्छ । ‘हामीले न्याय मागिरहेका छौँ तर सुनुवाई भइरहेको छैन ।’
डा. प्रज्वल सिंह
प्रज्वल र उहाँकी बहिनी प्रज्ञा सिंह बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत हुनुहुन्छ । कोरोनाका कारण पढाइ बन्द भएपछि अहिले दुवै जना नेपालमा नै हुनुहुन्छ र उहाँहरु न्यायका लागि दौडिरहनुभएको छ ।
माघ ३० गते आफूहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई आचारसंहिता विपरीत हेलचेक्राई र लापरबाही गर्ने चिकित्सकमाथि कारबाहीको माग गर्दै उजरी दिएको र सो उजुरीमा काउन्सिलले दोषीलाई कारवाहीको नाममा उन्मुक्ति दिन खोजेको प्रज्वलको भनाई छ ।
डा.सिंहकी श्रीमती विना सिंहले मेडिकल काउन्सिलमा कारबाहीका लागि उपचारमा संलग्न तीनै जना डाक्टर विरुद्ध उजुरी दिनुभएको थियो । काउन्सिलको २०७६ फागुन २२ गतेको बैठकले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि थप स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्यो ।
काउन्सिलले डा.सन्तोष साहलाई घटनामा संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दियो भने डा.तुलाचनलाई एक वर्षका लागि ईसोफेजिएल इण्डोस्कोपी गर्न नदिने र बन्दाबन्दीका कारण समयमा नै स्पष्टीकरण दिन नसकेकी एनेस्थेसियाकी डा.लक्ष्मी पाठक बारेमा निर्णय हुन बाँकी छ ।
प्रज्वल भन्नुहुन्छ, ‘आगामी दिनमा डाक्टरको लापरवाहीका कारण अरु बिरामीको अनाहकमा ज्यान नजाओस् भन्नका लागि आफूहरुले कडा कारबाहीको माग गरे पनि काउन्सिलले चिकित्सकलाई जोगाएर कारबाही गरेको जस्तो गरि औपचारिकता निभाएको छ ।’
पीडित परिवारले डा. तुलाचनलाई परिषद्को कानूनमा उल्लेख गरिएको कडा सजाय दिन र डा. पाठकलाई अनुसन्धान पूरा गर्न काउन्सिलमा निवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, काउन्सिलको अनुसन्धानबाट उपचारमा संलग्न नभएको भनिएका डा. सन्तोष शाहमाथि पनि पुनः अनुसन्धान गर्न निवेदनमा माग गरेका छन् ।
काउन्सिलले डा.सन्तोष साहलाई घटनामा संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दियो ।
डा.ज्ञानेश्वरका छोरा प्रज्वल बुबाको उपचारमा ५० लाखभन्दा बढी खर्च भएको बताउनुहुन्छ । प्रज्वलले थप्नुभयो, ‘काउन्सिलको सदस्य रहेको मेरो बाबुले न्याय पाउनुपर्छ, आफ्नै सहकर्मीको लापरवाहीले हामीले बुवा गुमाएका छाैँ । १० वर्षदेखि कार्यरत मेडिकल कलेजमा यस्तो घटना भयो, हामीले मेडिकल कलेजबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’
डा.सिंहका परिवार अहिले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै न्यायका लागि विभिन्न निकायमा गइरहेका छन् । युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्जलाई पटक–पटक क्षतिपूर्ति र सुविधाबापतको रकम माग गर्दै निवेदन दिँदासमेत सुनुवाइ नभएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
अस्पताल प्रशासनले भने उपचारमा डा.सिंहलाई बचाउन धेरै रकम खर्च गरेको भन्दै परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताएको छ । अस्पतालका निर्देशक खुमाप्रसाद अर्यालले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंसम्म हेलिकोप्टरमा पठाएको र उपचारमा पनि खर्च गरेकाले थप रकम दिन नसकिने बताउँदै आउनुभएको छ ।
स्व. डा. ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंह
डा.ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंह २०७६ साल भदौ १० गते श्रीमती विनासहित एक विवाह भोजमा सहभागी हुनुभयो । भोजमा राती करिव ९ बजेतिर खाना खाने क्रममा सिंहको घाँटीमा खसीको हड्डी अड्कियो । त्यसपछि तत्कालै उहाँलाई यूनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा लगियो । सिंह १० वर्षदेखि सोही मेडिकल कलेजमा हाडजोर्नी विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।
मेडिकल कलेजले ग्राण्डी अस्पताल रिफर गरेको थियो तर हेलिकोप्टरमार्फत ग्राण्डी पुर्याइएका सिंहको उपचार त्यहाँ भएन ।
अस्पताल पुर्याइएको रात डा.सिंहको उपचार भएन । भोलिपल्ट बिहान ९ बजेतिर सिंहको घाँटीमा अड्किएको हड्डी निकाल्न शल्यक्रिया गर्न अप्रेशन थियटर लगियो । शल्यक्रियामा डा.तुलाचन, डा.पाठक र डा.साह सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
डा.पाठकले त आफूहरुले नयाँ किसिमबाट अप्रेशन गरिएको भन्दै डा. सिंहको सफल अपरेशन भएको भनी फेसबुकमा फोटो र भिडियो पनि पोष्ट गर्नुभयो । तर बिरामीको गोपनियता भंग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि उहाँले उक्त पोष्ट डिलिट गर्नुभएको थियो ।
झण्डै ७ घण्टा लगाएर गरिएको शल्यक्रियापछि डाक्टरहरुले आधा हड्डी निकालिएको र र आधा हड्डी पेटमा पुर्याएको जानकारी परिवारलाई दिनुभएको थियो । अप्रेसन सफल भएको र सिंहलाई तरल पदार्थ खान दिन मिल्ने डाक्टरहरुले बताएपछि सोही अनुसार खान दिइयो ।
लामो समयसम्म रहेको हड्डीले नलीमा प्वाल पारेकाले प्वालबाट गएको खानेकुराले संक्रमण गराई पीप जमिसकेको थियो ।
तर, १४ गते डा. सिंहले बान्ता आउनुका साथै ज्वरो पनि आएको थियो । तर उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले सोही दिन डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । तर स्वास्थ्य असहज हुँदै गएपछि सिंहकी श्रीमति विनाले घर नलैजाने अडान लिनुभयो । सिंहका भाइ अरुणकुमार सिंह पनि डाक्टर नै हुनुहुन्छ ।
आफ्नो दाजुको स्वास्थ्यमा एकपछि अर्काे समस्या देखिन थालेपछि हड्डी घाँटीमै अड्किएको शंका लागेर उहाँले दाजुको सिटी स्क्यान गर्न जोड दिनुभयो । तर अस्पतालले सिटी स्क्यान गर्न मानेन । बारम्बारको आग्रहपछि अस्पतालले सिटी स्क्यान गर्दा हड्डी घाँटीमै रहेको देखियो । यस सम्बन्धमा परिवारलाई केही पनि जानकारी नगराई आफ्नो बाबुलाइ पुनः आईसीयूमा सारिएको प्रज्वलले बताउनुभयो ।
आईसीयूमा लैजानासाथ अस्पतालले अर्को अप्रेसन गर्नुपर्छ भन्दै काठमाडौं लैजानुपर्ने बतायो । मेडिकल कलेजले ग्राण्डी अस्पताल रिफर गरेको थियो,हेलिकोप्टरमार्फत ग्राण्डी पुर्याइएका सिंहको उपचार त्यहाँ भएन । ग्राण्डीमै तयारी अवस्थामा रहेको एम्बुलेन्समा डा.सिंहलाई शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर लगियो ।
युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा सामान्य रहेको बताइएको सिंहको अवस्था जटिल भइसकेको थियो । मनमोहन कार्डियोथोरासिकमा सिंहको इन्डोस्कोपी गर्दा खाना खाने नली च्यातिएको र त्यसको संक्रमणले छातीमासमेत संक्रमण भएको देखायो ।
लामो समयसम्म रहेको हड्डीले नलीमा प्वाल पारेकाले प्वालबाट गएको खानेकुराले छातीमा संक्रमण गराई पीप जमिसकेको थियो । सो अवस्थामा कार्डियोथोरासिकका डाक्टरहरुले शल्यक्रिया त गरे तर स्वास्थ्यमा सुधार आउन सकेन । घटना भएदेखि ५ महिनासम्म निरन्तर औषधि लिइरहेका सिंहको २०७६ माघ २ गते मृत्यु भयो ।
न्याय खै ?
कुन प्रयोगशालामा कति परीक्षण ? निजीमा स्टार अगाडि
आफन्तको सिट सुरक्षित गर्न स्वास्थ्य पद्धतिलाई धरासायी बनाउँदै आयोग
नेपालमा कोरोनाको खोप आपूर्तिबारे भ्रम र यथार्थ
मंसिर ११ र १२ गते ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई भिटामिन 'ए' खुवाइने
आश्विन ०१, २०७७
नर्सको समस्या समाधानका लागि संघले अभिभावकत्व बहन गर्नेछ